Transducer ultrasonic, andiam-pandrefesana ultrasonic, Generator ultrasonic - Qianrong
Ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny fampiharana ultrasonic anao
Mpanamboatra matihanina amin'ny fikarohana ultrasonic, fampiroboroboana ny transducer ultrasonic mahery vaika any Shina
Any Hangzhou no misy anay, akaikin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Shanghai, miaraka amin'ny fampifanarahana politika mety sy fivezivezena mety. Eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia manana traikefa ara-barotra matotra sy maharitra isika.
Ny QRsonic dia mifantoka amin'ny fikarohana sy ny fampiroboroboana ny singa ultrasonika sy ny fampiharana. Tao anatin'izay taona lasa izay, ny milina QRsonic dia nahazo laza tsara avy tamin'ny mpanjifanay na tamin'ny tsena sy ny tsena manerantany.
QRsonic dia mpanamboatra matihanina amin'ny karazan-fitaovana ultrasonic rehetra. Afaka manaiky OEM & ODM isika, manome ny mpanjifa vahaolana feno amin'ny tolo-kevitry ny ultrasonika, fanandramana fitsipika, famokarana faritra sns.
20Khz Ultrasonic namboarina famonoana tady miaraka amin'ny ...
Haavo matetika 20khz Ultrasonic Industrial homo ...
Ultrasonic Copper Aluminium Fiovam-po 20Khz 300 ...
Nickel Mesh sy Nickel Plate Welding avy amin'ny 3000w 2 ...
20Khz 1500w Ultrasonic Welding Transducer miaraka amin'ny ...
15Khz 2600w Hery mahery vaika ultrasonic Welding Oscil ...
Hangzhou Qianrong Automation Equipment Co., Ltd. dia mpanamboatra matihanina amin'ny fikarohana ultrasonic, fampandrosoana mahery vaika ultrasonika transducer fampandrosoana sy ny famokarana any Shina. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny transducer, ny famatsiana herinaratra ultrasonic, ny milina vy metaly, ny faritra antenna tariby ultrasonika sns. Ireo famokarana ireo dia be mpampiasa amin'ny sehatra isan-karazany, toy ny plastika welding, vy vy, famehezana tsy voatenona sy fanapahana sns. Hatramin'ny niorenan'ny Qianrong Equipment, nifantoka hatrany tamin'ny filan'ny mpanjifa ny orinasa. Mandritra ny fizahana ny tsena anatiny ao Shina, asehonay an'izao tontolo izao ihany koa ny teknolojia ultrasonian'ny orinasanay. Ny kalitaony sy ny fahombiazany dia malaza amin'ny indostria.
Transducer Portable ultrasonika Impedance fanadihadiana ...
40Khz Ultrasonic Nano Spray Device miaraka amin'ny High Fr ...
Milina famonoana mazava tsara ho an'ny siantifika ...
35Khz Ultrasonic Spot Welding Machine miaraka amin'ny Digi ...
Fanoloana fanjaitra nentim-paharazana sy zaitra natao kofehy ...
Manome fitaovana fanapahana ultrasound 30Khz ho an'ny R ...